Ifayibha ye-Optic Splitter Box Optical Splitter Box 1X8 LGX Cassette ene-SC PC Connectors- The Cableonline.com
I-Fiber Optic Splitter Box Optical Splitter Box 1X8 LGX Cassette Ngezihlanganisi ze-PC ze-SC
Inkcazo yeMveliso eneenkcukacha: Igama leLGX PLC Splitter 1X8 Umbala: Ubushushu obuSebenzayo: -40C ukuya kwi-85C Izinto: Uhlobo lwefayibha ye-LGX: Uhlobo lwePakethe ye-G657A1: I-LGX Plastic Fibre Optic Splitter Box Optical Splitter Box 1X8 LGX Cassette ene-SC PC Connectors PLC Splitters iyasetyenziswa ukuhambisa imiqondiso ebonakalayo kwiindawo ezininzi zokulungiswa. Kwiinethiwekhi zamehlo, kuhlala kufuneka ukwahlula isiginali ebonakalayo kwiimpawu ezifanayo, okanye ukudibanisa imiqondiso emininzi kwi-singl ...
-40C ukuya kuma-85C
I-PLC Splitters isetyenziselwa ukuhambisa imiqondiso ebonakalayo kwiindawo ezininzi zokulungiswa. Kwiinethiwekhi zamehlo, kuhlala kufuneka ukwahlula isiginali ebonakalayo kwiimpawu ezifanayo, okanye ukudibanisa imiqondiso emininzi kwisiginali enye. I-PLC Splitter luhlobo lwesixhobo solawulo lwamandla esenziwe sisebenzisa ubuchwepheshe be-silica optical waveguide.
Sibonelela ngothotho olupheleleyo lweemveliso zokwahlula ezi-1 * N kunye nee-2 * N ezilungiselelwe usetyenziso oluthile. Zonke iimveliso ziyahlangabezana neemfuno ze-GR-1209-CORE-2001 kunye ne-GR-1221-CORE-1999.
Olu hlobo blade PLC yokuchaka cantain ezimbini 1 * 8 PLC yokuchaka ngaphakathi, Iluncedo kakhulu ukuba FTTH isisombululo ibandla. Ukusebenza komgangatho ophezulu, njengokulahleka okuphantsi kokufakwa, i-PDL ephantsi, ukulahleka okuphezulu kokubuya kunye nokufana okugqwesileyo kububanzi bebanga lobubanzi ukusuka kwi-1260 nm ukuya kwi-1620 nm, kunye nokusebenza kubushushu ukusuka -40ºC ukuya ku-85ºC.
Ukuhanjiswa kweMpawu zoMbane
Inkqubo yeLan kunye neCATV
Inkqubo yokulinganisa kunye neNkqubo yeLaser
Iinkqubo ze-DWDM kunye neCWDM
Ukufana kweshaneli ukuya kumjelo
Ebanzi yokusebenza kwamaza: Ukusuka 1260nm ukuya 1650nm
Ubushushu bokuSebenza ngokubanzi: Ukusuka kwi -40 ukuya kwi-85 ℃
Ukunyaniseka okuphezulu kunye nozinzo
IParamu Iyunithi Ixabiso
Uhlobo lweMveliso 1 × 2 1 × 3 1 × 4 1 × 6 1 × 8 1 × 12 1 × 16 1 × 24 1 × 32 1 × 64 1 × 128
Ukusebenza kwamaza nm 1260 ukuya 1650
Ukufakwa kwelahleko Uhlobo. dB 4 6 7 9.4 10 12 13.2 16 16.5 20.5 24.5
Ukungafani (uMax.) dB 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1 1.4 1.5 1.6 2 2.6
I-PDL (Max.) dB 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8
Buyisela ilahleko dB 55/50
Ulwalathiso dB 50
Uhlobo lweMveliso 2 × 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 2 × 64 2 × 128
Ukufakwa kwelahleko Uhlobo. dB 4.3 7.3 10.5 14 17.2 20.8 24.8
Ukungafani (uMax.) dB 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2 3
I-PDL (Max.) dB 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 1
Q1, Lithini ixesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokubanzi, kuya kuthatha iintsuku ezi-3-7 emva kwentlawulo yedipozithi.
Ixesha lokuhambisa elithile lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani beodolo.
Q2, Ngaba uvelise ngokweesampulu okanye umzobo?
A: Ewe, sinokuvelisa ngeesampuli zakho okanye kwimidwebo yobugcisa. Singayila kwaye sikuvulele ukungunda.
Q3, uthini umgaqo-nkqubo wakho wesampulu?
A, Sinokubonelela ngesampulu yasimahla yezixhobo ze-fiber optic, kodwa abathengi kufuneka bahlawule iindleko zekhuriya.
Q4, Ngaba uvavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuziswa?
A, Ewe, zonke iimpahla zivavanywa nge-100% ngaphambi kokupakisha kunye nokuhanjiswa.
Iingxelo zovavanyo zinokunikezelwa xa kukho imfuneko yoko.
Q5, Uliqinisekisa njani ishishini lexesha elide kwaye ugcina intsebenziswano elungileyo?
A, Okokuqala, sigcina ukuphucuka okuqhubekayo ukwenza iimveliso ezisemgangathweni kunye nokubonelela ngenkonzo engcono ngelixa sigcina amaxabiso okhuphiswano ukuqinisekisa ukuxhamla kwabathengi.
Ngaphandle koko, siyabahlonipha bonke abathengi njengabahlobo bethu kwaye siyayixabisa yonke iodolo encinci okanye enkulu.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngazo naziphi na izicelo -Iqabane lakho elithembekileyo kwi-fiber optics / OPTICO!
ifayibha optic yokuchaka intambo,
yokuchaka ucingo optical
Egqithileyo Icompact LGX Type 1 × 16 PLC Splitter, Ngaphandle kweGPON Inkqubo yeFiber Optic Cable Splitter
Okulandelayo: Elungiselelweyo PLC Fibre Umthambo Splitter Imodyuli 1X64 Full wavelength 1260-1650nm
Inkcazo yeMveliso eneenkcukachaIgama leMveliso: I-LGX PLC Splitter 1X8Color: Ubushushu beGreyWorking: -40C ukuya kwi-85CIzinto: LGXFiber Uhlobo: G657A1Uhlobo lwePakethe: I-LGX PlasticFiber Optic Splitter Box Optical Splitter Box
FTTH Fibre Umthambo Splitter 0.9mm 1 * 8 Steel Tube ...
1X4 0.9mm PLC yokuchaka ngesihlanganisi se-LC APC
1X8 0.9mm PLC yokuchaka 1m ngesihlanganisi se-AP APC
Isisombululo se-ABS 1X32 PLC splitter SC UPC 1M FTTH